Puntland oo war ka soo saartey Dagaal Galabta ka dhacey Degmada Dhahar | maakhir.com
Puntland oo war ka soo saartey Dagaal Galabta ka dhacey Degmada Dhahar
April 17, 2007 in Maakhir, Somalia
Boosaaso:-Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaarada Warfaafinta ee Maamul Goboleedka Puntland
ayaa waxaa lagu sheegey in Maanta oo ay tahay 14’ April weerar gardaro ah ay ku soo qaadeen Ciidamada Maamulka isku magacaabey Somaliland deegaanka Dhahar ee Gobolka Sanaag.
Warsaxafadeedka ayaa waxaa lagu sheegey in weerarkaan oo ahaa mid gar Darro ah ay ku soo qaadeen Fariisimaha Ciidamada Dawlad Goboleedka Puntland ee Gobolka Sanaag Ciidamo ka socda Deeganada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya.
C/raxmaan Maxamed Bangax wasiirka Wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Puntland ayaa Saxaafada u sheegey In ciidamada Dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo ka shaanaya shacabka Deegaanka ee Gobolka Sanaag ay ka saareen Ciidamadii Somaliland oo weerar ku soo qaadey shacabka iyo dadka Gobolka Sanaag.
Warsaxaafadeedkan oo uu saxaafada u akhiriyey wasiirka waxaa kale oo uu ku sheegey in Ciidamada Dawlad Goboleeka Puntland ay haatan Gacanta ku hayaan Deegaanada Gobolka Sanaag oo ay ku soo Duuleen Ciidamada Somaliland.
C/raxmaan maxamed Bangax waxaa uu sheegey in Ciidamada Puntland ay ka Gubeen Sadex Gaari oo tikniko ah ciidamada Somaliland, waxaa kale oo uu sheegey wasiirku in Shan Gaari oo Tikniko ah ay ku qabsadeen Dagaalkii Galabta dhacay ciidamada Puntland, wasiirku ma uusan xusin wax khasaaro ah oo soo gaarey dhinaca Ciidamada DG Puntland.
Warsaxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegey in Ciidamad Dawlad Goboleedka Puntland ay haatan sii raacdeynaynayaan Xoogagii Maanta weerarka ku soo qaadey Deegaanka Dhahar ee Gobolka sanaag.
War saxafadedkan ka soo baxay wasaarada Warfaafinta ee Punland ayaa waxaa uu Yimid ka gadaal markii Ciidamada Somaliland ay weerar ku soo qaadeen Deegaanka Dhahar ee Gobolka sanaag, ilaa iyo Haatana lama garanayo sababta Rasmiga ah ee ka danbeysey weerarkaas inkasta oo baryihii ugu danbeysey ay Imaanayeen wara sheegaya in Deegaanka Dhahar ee Gobolka Sanaag ay Damacsanyihiin Ciidamada Somaliland in ay weerar ku soo qaadaan.
Ilaa haatan ma jiraan Ilo dhex dhexaad ah oo ka warbixiyey khasaaraha dhabta ah ee uu dhaliyey weerarkii Galabta ka dhacay deegaanka Dhahar ee Gobolka Sanaag.
Qaar ka mid ah Isimada Dawlad Goboleedka Puntland aya galabta Bayaan ka soo saarey Magaalada Boosaaso Bayaankaas ayaa waxaa uu ku saabsanaa colaada ka soo Cusboonaatey Gobolka Sanaag Gaar ahaan Deegaanka Dhahar.
« Xildh. Caasho Axmed C/lla “Labada dagaal ooge ee Rayaale iyo Cadde waa iney faraha kala baxaan arimaha gobolada Sool iyo Sanaag”
The Dhahar Debacle »